လေမလည်ရ၊ လေချဉ်မတက်ရ၊ ကြို့ မထိုးရ၊
နိုင်ငံမှ မြို့ ကလေး...
စပိန်နိုင်ငံ၊မက်ဒရစ်မြို့ အရှေ့ မြောက်ဖက်၊မိုင် ၇၀ အကွာရှိ လာတိုဘာ မြို့ ကလေးရဲ့ မြို့ တော်
၀န်က မြို့ သူ၊မြို့ သားများအနေဖြင့် (အများသူငါမြင်ကွင်း၊ လူလည်ကောင်တွင် လေမလည်ရ၊
လေချဉ်မတက်ရ၊ ကြို့ မထိုးရ၊ စားသောက်ရာတွင် ရှူးရှူးရှဲရှဲ အသံမမြည်စေရ စသည့် မယဉ်
ကျေးသည့်အပြုအမူပေါင်း ၆၅ မျိူးအား တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် အမိန့် တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါ
အများပြည်သူရှေ့ တွင်မိမိ၏မဖွယ်မရာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအား ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊
အတွင်းခံဘောင်းဘီများအားနေသားတစ်ကျဖြစ်အောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ နှာခေါင်းနှိုက်ခြင်း (နှပ်ချေး
ကလော်ခြင်း) စသည်များအား လုံးဝ၊ လုံးဝမပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပြီး လက်ဖြင့် မကာပဲ ချောင်းဆိုး
ခြင်း၊ သမ်းဝေခြင်းများ၊ အစားအစာစားယင်းစကားပြောခြင်း စသည်များအားလည်း တားမြစ်
အားလုံးယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ စေချင်သည့် မြို့ ကလေး၏မြို့ တော်ဝန်
လက်ယာယိမ်း သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် မြို့ တော်ဝန် ဂျူလီယန်အတျန်ဇာက ၎င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ 
သည့် စည်းမျဉ်းများအား ချိူးဖောက်ပါက ဒါဏ်ငွေမဆောင်ရသော်လည်း လူမှုရေး၊ ကိုယ်ကျင့် 
သိက္ခာဆိုင်ရာအားဖြင့် တော့ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
ဒီမြို့ ကလေးမှာလိုက်နာသင့် တဲ့ လူ့ ကျင့် ဝတ်က ၆၅ ခုရှိပါတယ်...
အဘိုး၊ အဘွားများထံ ပုံမှန်သွားရောက်မလည်ပါတ်သည့် မြေး၊ မြစ် များလည်း သက်ဆိုင်ရာ
လူမှုရေးကျင့် ဝတ်များ လျော့ နည်းလာခြင်းအား တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် စပိန်နိုင်ငံ၏ ညီ
ညွတ်သောလက်ဝဲပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် မြို့ တော်ဝန်က အဆိုပါစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများ
ရေးဆွဲပြီး ဒေသခံအုပ်ချူပ်မှုကောင်စီက လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဒီစည်းကမ်းတွေဟာ မေ့ လျော့ ပျောက်ကွယ်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့လူယဉ်ကျေးတွေ မမေ့ သင့် တဲ့ 
အခြေခံလူ့ ကျင့် ဝတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအလေ့ အထတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ လည်း မြို့ တော်ဝန်က သူရိ
ယ သတင်းစာကြီးကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို မြို့ သူ၊ မြို့ သားအားလုံးက ထောက်ခံခဲ့ ကြတော့ မဟုတ်ပါ
သာယာလှပတဲ့ မြို့ ကလေးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ယဉ်ကျေးကြဖို့ လိုပါတယ်...
တစ်ချိူ့ ကအဆိုပါစည်းကမ်းစာရွက်အားဖတ်ရှုပြီးနောက် မြို့ တော်ဝန်အားနှုတ်ထွက်ဖို့ တောင်း
ဝေဖန်သူတစ်ဦးကတော့ နောက်တစ်ဆင့် ဆိုယင် လူတိုင်းရဲ့ ဦးခေါင်းထဲကို သူတို့ ထိန်းချူပ်ချင်
သလိုထိန်းချူပ်နိုင်ဖို့ မိုက်ခရိုချစ်ပ် ပြားတွေထည့် ကြလိမ့် မည်ဟုအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင်ရေး
The Mayor says that he wants to do away with all uncivilised forms of behaviour, and the lack of education and social values by issuing the by-law which goes on, ‘Cover your mouth with your hand if you sneeze or cough, and turn away from anybody close by.’
The document also notes other problems, the excessive noise disturbing other residents, the litter in the streets, building works or openingabusiness with no licence and the ill-treatment of animals.
The young IU left wing Mayor, Julián Atienza, says he realises breaking his by-law cannot result in any administrative fine, but doing so would be blameworthy inacivic and moral way.
The order has now been approved in the Town Hall.
Posted by peter kyaw | at 1:58 AM |
Labels: news: typicallyspanish.com/ daily mail.co.uk
လိုက်နာနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ .. ဒီလိုမျိုး ဥပဒေကို ပညတ်သောအားဖြင့် ကြည့်ရတာ တော်တော် အခြေနေဆိုးနေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. လေလည်တယ်ဆိုတာကြီးကတော့ ဘယ်သူက လည်တယ်လို့ သိမှာလဲ ... တွေးကြည့်တာပါ ..